Toobka ama taashka aroos ee aduunka ugu dheer 3 km & 600 oo qof oo ka shaqeysay – SBC
Toobka ama taashka aroos ee aduunka ugu dheer 3 km & 600 oo qof oo ka shaqeysay
Aroos sheeko yaab & qosol leh ayaa todobaadkan ka dhacay magaalada Naboli ee dalka Talyaaniga ka dib markii aroosadii arooskaasi ay ku labisatey toob ama taashka arooska kaasi oo loo aqoonsadey kii ugu dhirirka badnaa aduunka.
Elena De Angelis oo aheyd gabadhii toobkaasi xiratey ayaa u baahatey 600 qof oo ka daba qaada toobkaasi oo bartamaha laamiga ku noqdey sida tareenkii.
Kumaan kun oo qof ayaa isagu soo baxdey wadada Casal di Principe, Naples kuwaasi oo goob joog ka ahaa arooskaasi, waxaana loo aqoonsadey taashka haweenaydaasi ay xiratey kii ugu dheeraa aduunka sida lagu shaaciyey buuga lagu qoro waxyaabaha mucjisooyinka ah ee dunida ka dhaca ee Guiness Book of World Records.
Elena oo ku labisan toobkaasi ayaa waxaa ka muuqatay dhoolo cadeyn iyadoo gacanta haysatey gacaliyeheeda Ferdinand Pucci.
Marada arooska oo sida tareen laamiga u daadsan
Taashkaasi ayaa waxaa farsameysay shirkada lagu magacaabo Gianni Molaro Campania , iyadoo boqolaal gabdho Iskooley ah iyo hooyooyinkood ayaa ku mashquulsanaa inay ku caawiyaan caruusada sidii taashku ay kor ugu hayaan oo aanu dhulka u daadan maadama uu dhan 3 km.
waxa aroos ah